Shily · Jona, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Shily · Jona, 2013
Tantara mikasika ny Shily tamin'ny Jona, 2013
VIDEO: Ny Fomba Mety Handratran'ilay Fifanarahana Trans-Pasifika Ireo Mpampiasa Aterineto
Aostralia26 Jona 2013
Misy lahatsary iray vaovao manazava ny mety hisian'ny voka-dratsy mampanahy ho an'ireo mpampiasa Aterineto aterak'ilay fifanaraham-barotra goavana nifanaovan'i Etazonia sy governemanta folo hafa avy any amin'ny faritra Pasifika, ilay Trans-Pacific Partnership (TPP).
Niala ilay Kandidà Voalohany Avy Amin'ny LGBT Ho Ao Amin'ny Kongresy Ao Shily
Fifidianana21 Jona 2013
Valentina Verbal dia nanao fampielezan-kevitra hanova ny tantara ho voalohany amin'ny vehivavy, nefa teraka ho lehilahy, mpikambana ao amin'ny Kongresy ao Shily. Raha maharesy izy, dia mety hanàna solontena tao amin'ny Kongresy ny vondrom-piarahamonin'ny LGBT ao Shily, mialoha lalana ireo firenena rehetra manerana izao tontolo izao.
TPP: Loza Goavana Mananontanona Ny Aterineto Erantany Hatramin'ny ACTA?
Amerika Avaratra01 Jona 2013
Hivory mba handinika ilay fifanarahana ara-barotra Fiaraha-miombon’antoka manerana an’i Pasifika (Trans-Pacific Partnership-TPP) i Etazonia sy ireo fanjakana folo manodidina an’i Pasifika. Hatrany am-boalohany dia nafenina io fivoriana momba ny fifanarahana io, saingy mifototra amin’ilay taratasy niparitaka sy ny tsy maha-demokratika io rafitra io dia manana ny antony rehetra tokony hanairana...